Ngelinye ilanga ngathola isaziso esasivela kumholi wami omkhulu, singicela ukuba ngibe semhlanganweni walabo esisebenza nabo. Ngokuvamile lesi yisehlakalo esiyintokozo, kodwa ngithe uma ngicabanga ngokuthi umsebenzi wami wawungahlelekile kanjani kamuva nje, ngaba nokukhathazeka kakhulu. Ukuba umphathi wami wayengathola ukuthi ngangingakaqedi namunye womsebenzi wami, nakanjani wayezobhekana nami, mhlawumbe angixoshe nokungixosha. Ngangiyokwenzenjani-ke uma enza lokho? Ngosuku olulandelayo ngaya emhlanganweni inhliziyo yami ingisinda. Uma ngifika khona, ngabona ukuthi umphathi wami wayengakafiki, kodwa abanye babalingani bami base befikile. Ngacabanga ngathi: “Angazi ukuthi simi kanjani isimo sowabo umsebenzi. Emhlanganweni wokugcina, ngangibezwe bekhuluma ngokuthi base bewuqeda umsebenzi wabo, kusho ukuthi nakanjani-ke manje sebewuqede wonke. Uma sebewuqedile wonke umsebenzi wabo futhi kuyimi kuphela engimubi, kusho ukuthi iphelile indaba yami.” Ngamangala kodwa emva kwalokho, uma sesixoxa ndawonye ngezimo zethu zomsebenzi, abaningi babalingani bami babekhuluma ngokuthi babengaziqedile izingxenye ezithile zomsebenzi wabo. Ngithe uma ngikuzwa lokhu, inhliziyo yami eyayikade isinda ngaphambilini ngokuphazima kweso ngayizwa seyilula kakhulu. Ngazicabangela ngathi: “Kubonakala sengathi akekho umuntu owayeqede umsebenzi wakhe, akumina kuphela. Asikho isidingo sokuzikhathaza. Ngeke basixoshe sonke.” Ingxenye enkulu yemizwa yami eyayinovalo yanyamalala ngokushesha.
Lapho sengiqala ukunethezeka ngesimo sokuziduduza kwami, ngafikelwa indima yokuhlanganyela engenhla engqondweni yami: “Uma umuntu eletha imibono yezwe emndenini kaNkulunkulu, lapho-ke iyimicabango nje futhi idelela uNkulunkulu. Abantu abaningi banemibono efanayo ngezinto njengabangakholwa. Ngoba abanaqiniso ngaphakathi kubona, uma bengena emndenini kaNkulunkulu basebenzisa imibono yomhlaba ukubuka umsebenzi womndeni kaNkulunkulu, ukuphawula ezindabeni zomndeni kaNkulunkulu, bese kuba nomphumela obaphindisela emuva, okwenza ukuba njalo bahlale bebuthakathaka futhi benemicabango ethunazayo, bangakwazi ukufuna iqiniso kungenjalo bakhokhe inani. Ingabe lokhu akudalwa ukungazi kwabo?” (“Ukwazi Imicabango Nokwahlulela Komuntu” embhalweni othi Izintshumayelo Nokuhlanganyela III). La mazwi angenza ngacabanga ngendlela engenze ngayo esikhashaneni esincane esidlule. Lapho ngicabanga ngokuthi ngangingawuqedanga umsebenzi wami, inhliziyo yami yasinda futhi ngalokhu ngikhathazekile. Kodwa ngathi lapho ngithola ukuthi abalingani bami nabo bebengawuqedanga umsebenzi wabo, ngazizwa ngikhululeka ngokushesha, futhi ngacabanga ngonembeza okhululekile ukuthi kwakungemina kuphela owayengafezanga lutho. Uma umholi wethu wayengabhekana nathi, kusho ukuthi wayezobhekana nawo wonke umuntu. Njengoba bebaningi kangaka kithina ababengaqedanga umsebenzi wethu, umphathi wethu nakanjani wayengeke asixoshe sonke. Ingabe lokhu akuyona indlela yokucabanga eyayibuswa umbono kaSathane: “Ingabe akusona isono uma kwenziwa yiwo wonke umuntu”? Ingabe ngangingasebenzisi indlela yokubuka kaSathane ukulinganisa izimiso zomsebenzi webandla? Ngangisebenzise indlela kaSathane yokubuka izinto ebandleni, ngayisebenzisela ukuziduduza, ukuzitika ngengangikwenza—kodwa ingabe ngangingazilimazi? Empeleni ngangiyimpumputhe futhi ngingazi lutho! Uma ngicabanga ngibheka emuva, ziningi izikhathi lapho ngemukela khona ukubuswa yile ndlela kaSathane yokucabanga ukuze ngiziduduze. Kwaba nesikhathi, lapho ngaphila enyameni ngaphandle kokungena empilweni futhi, yize noma ngangikhathazekile ngensindiso yami, ngathi uma ngibona abanye abafowethu nodadewethu nabo bengangenanga eqinisweni, kwaphela ukukhathazeka futhi ngayeka ukulokhu ngizihlupha. Ngangicabanga ukuthi uma abantu abaningi kangaka nabo bengangenanga empilweni, kusho ukuthi uNkulunkulu ngeke asihlunge sonke, wayengakwenza lokho? Ngakho-ke ngaphila nje esimweni sokwenza umathanda wokuzenelisa mina, ngingazethwesanga mthwalo ngempilo yami. Ngangithi uma ngingabhalanga mbhalo isikhathi eside futhi senginemizwa yokuzisola, ngibone abafowethu nodadewethu nabo abangabhalanga lutho, bese ukuzisola okwakusenhliziyweni yami kunyamalala. Ngangicabanga ngithi: “Vele akuyona into etheni ukungabhali imibhalo, futhi-ke akuyimi kuphela ongazange ayibhale. Uma ngingasaboni miphumela yomsebenzi wami wevangeli, ngangizizwa ngikhathazekile. Kodwa ngithi uma ngibona umsebenzi wevangeli wezinye izindawo nawo ungenazithelo, ngibe nokuthula, ngicabange ukuthi wonke umuntu wayenje, ukuthi kwakungemina kuphela ongakaze alethe muntu ebandleni. … Ngaleso sikhathi, ngabona ukuthi indlela kaSathane yokubuka izinto— “Akusona isono uma kwenziwa yiwo wonke umuntu”—yase yakhele yazinza ngempela enhliziyweni yami. Ngaphansi kokubuswa yile ndlela yokucabanga, ngangiphila ngokuzitika ngokuthandwa yimina uma ngenza imisebenzi yami, ngingasebenzi ngamandla ami onke uma ngiyenza futhi ngingafuni umphumela omuhle kakhulu. Akugcinanga nje ngokuletha ukulahlekelwa okukhulu ebandleni, kodwa futhi kwaletha ukulahlekelwa okukhulu empilweni yami. Ngoba ngangemukele ubuthi obuyinkohliso bukaSathane obuthi— “Akusona isono uma kwenziwa yiwo wonke umuntu”—angizange ngiwenze umthwalo wami umsebenzi wami webandla, ngangilokhu ngenza umsebenzi ngokungazinikeli ngokuphelele futhi ngingalangazelele mphumela; ngangiphelelwe unembeza kanye nokucabanga okuphusile isidalwa sikaNkulunkulu okufanele sibe nakho. Ngenxa yokuthi ngangamukele amaketango endlela yokucabanga kukaSathane yokuthi “Akusona isono uma kwenziwa yiwo wonke umuntu,” vele ngangilokhu ngidavuza nje endleleni yami yokulandela uNkulunkulu. Ngangingazange ngicabange ngokukholwa kwami kuNkulunkulu njengokungaba nomphumela nakancane, angizange ngifune iqiniso ngokuzimisela, angizange ngibe nandaba noma ngigxile ekungeneni kwami empilweni; angizange ngibe namgomo engizowulandela, ngingazazi ngibhekephi empilweni. Ngadavuza nje ngihamba ngingazazi ngibheke kuphi ngenza okuncanyana nje ukuze ngiqhubeke nempilo. Kwaba yilapho kuphela-ke lapho ngabona khona ukuthi ngangilinyazwe kakhulu indlela yokucabanga kaSathane yokuthi “Akusona isono uma kwenziwa yiwo wonke umuntu,” ngaphelelwa unembeza ngokuphelele, ukucabanga okuphusile, ukuthembeka kanye nesithunzi umuntu ojwayelekile okufanele abe nakho. Uma ngicabangisisa ngokuqikelela, ngangiphila ngokwami ukucabanga nokubona sonke lesi sikhathi, ngikholwa ukuthi “Akusona isono uma kwenziwa yiwo wonke umuntu,” ukuthi uma abantu abaningi benza isono kusho ukuthi uNkulunkulu uyosiyeka nje siphume enethini angajezisi muntu, angizange ngicabange ngokuthi ngempela uNkulunkulu angase abaphathe noma angabaphathi abantu ngale ndlela. Ngaleso sikhathi, ngehluleka ukungawacabangi amazwi kaNkulunkulu, athi: “Lowo oweyisa umsebenzi kaNkulunkulu uyothunyelwa esihogweni; noma iliphi ilizwe eleyisa umsebenzi kaNkulunkulu liyobhujiswa; noma isiphi isizwe esivukayo ukumelana nomsebenzi kaNkulunkulu siyoshabalaliswa emhlabeni, futhi singabe sisaba khona” (“UNkulunkulu Wengamela Phezu Kwesiphetho Sesintu Sonke” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Amazwi kaNkulunkulu angenza ngathuthumela ukwesaba, njengoba ngangibona ukuthi isimo sikaNkulunkulu sasingeke sivumele muntu ukuba enze icala nokuthi ngeke asekele isinqumo Sakhe ekutheni abhubhise noma cha umuntu enanini lezoni. Uma ngicabanga ngibheka emuva, abantu esikhathini sikaNowa babona futhi bephinga, bonakala ngendlela yokuthi uNkulunkulu wababhubhisa bonke labo ababephila ngaleso sikhathi ngaphandle komndeni kaNowa. Ukubhubhisa Kwakhe idolobha laseSodoma nakho kwakufana nalokhu. Manje abantu ezinsukwini zokugcina sebefinyelele ezigidigidini eziningi, inani elevile kulelo lezinsuku zikaNowa. Kodwa uNkulunkulu akawubekile eceleni umthetho Wakhe futhi wakhombisa umusa ngenxa yokuthi ziningi kakhulu izoni ezinsukwini zokugcina; kulaba bantu uNkulunkulu unenzondo, ukwenyanya kanye nokulahla kuphela. Ekugcineni, ngaphandle kwalabo abambalwa abangasindiswa, uNkulunkulu uzobhubhisa bonke abasele. Kulapho kuphela engabona khona ukuthi bengisiqonda kancane kangakanani isimo sikaNkulunkulu. Angizange ngiqonde ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu olungile, ongcwele futhi ongavumeli umuntu ukuba enze izenzo ezimbi, kangangokuthi ngangididwe amanga kaSathane ngaze ngawela emacebweni obuqili. Namuhla, ukube bekungeve kungenxa yokukhanyisela kukaNkulunkulu, ngabe ngisaphila esonweni ngaphandle kokubona ukuthi kwakuyisono, ekugcineni ngijeziswe nguNkulunkulu ngaphandle kokwazi nokwazi ukuthi kungani ngangizofa—ngempela kwakuyingozi kakhulu!
Okwedlule: Ngiyalibona Iqiniso Lenkohlakalo Yabantu
Okulandelayo: Ngasibona Kahle Isimo Sami Soqobo